Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ((sw))
The United Republic of Tanzania en
Repoblikan'i Tanzania ((mg))
Teny filamatra : Uhuru na Umoja
(Fahefana sy firaisana)
Teny ofisialy kiswahili, Anglisy
6°11′0″S 35°44′5″E﻿ / ﻿6.18333°S 35.73472°E﻿ / -6.18333; 35.73472
Tanàna ngeza indrindra Dar es Salam
- Pray mnistra Repoblika federaly
- Rano (%) faha 31
40 213 162 mpo.
Anaran'ny mponina Tanzanianina
IDH (2004) ▲ 0,430 (ambany) faha 162
Sandam-bola Shilling tanzanianina (TZS)
Hiram-pirenena Mungu ibariki Afrika
I Tanzania dia firenena any Afrika Atsinanana, izay manana morontsiraka ao amin' ny Ranomasimbe Indiana, izay manana velaran-tany mirefy 945 100 km². I Dodoma no renivohiny, izay misy mponina 40 tapitrisa eo ho eo.
Ny tanin' i Tanzania dia ahitana ampahany ao amin' ny tanibe sy ampahany foronina nosy maromaro, ka ny lehibe amin' ireo dia i Zanzibar sy i Pemba ary i Mafia.
Lembalemba afovoan-tany no manjaka amin' ny vohon-taniny, izay mananana salan-kaambo mirefy 1 200 m. Ny avaratra-andrefana amin' io firenena io no misy an' i Kilimanjaro, izay tendrombohitra avi indrindra aty Afrika (5 895 m). Ony sy renirano maro no mamakivaky an' i Tanzania sady maro koa ny farihy hita ao (anisan' izany ny farihy Victoria ao avaratra, ny farihy Tanganyika ao andrefana, ny farihy Malawi ao atsimo-andrefana). Ny 40 %n' ny tanin' i Tanzania dia rakotra ala. Ahitana karazam-biby maro ny ao Tanzania, ka ny ampahefatry ny velaran-tany dia natokana ho tahirin-javaboary (isan' izany ny valan-javaboarin' i Serengeti) izay natao hiarovana ireo biby ireo.
I Tanzania ao Afrika
Saika ny vahoaka tanzaniana manontolo no manam-piaviana banto. Ny 45 %n' ny mponina dia Kristiana fa ny 35 % kosa Miozolmana. Maro ihany koa ny manaraka ny fivavahan-drazana afrikana animista. Miozolmana daholo ny olona miaina ao Zanzibar.
Miompana amin' ny fambolena sy ny fiompiana ny toekaren' i Tanzania, ka isan' ny volena any ny kafe sy ny landihazo ary ny dite. Ny Shiling tanzanianina no vola miasa any. I Tanzania dia misy toerana fizahan-tany malaza. Fantatry ny olona eran-tany i Tanzania amin' ny fisian' ny tendron' i Kilimanjarô sy ny fisian' ny Serengetti National Park. Azo jerena any Tanzania koa ny fôsilin' olombelona anisan' ny antitra indrindra any Afrika Atsinanana, hita tao amin' ny keok' i Olduvai.
Zanatany britanika taloha i Tanzania izay niforona tamin' ny alalan' ny fanakambanana an' i Tanganyika sy i Zanzibar tamin' ny taona 1964. Ny fiteny soahily sy ny fiteny anglisy no fiteny ôfisialin' i Tanzania, ary miteny soahily na anglisy ny ankabeazan' ny mponina any.
Nandray ampahany amin' ny kolontsain' ny Arabo silamo i Tanzania tamin' ny taonjato faha-7, manao varotra nà haranify sy andevo. Lasa zanatany alemàna (niaraka tamin' i Zanzibar) sy anglisy (ny sisa) i Tanzania tamin' ny taonjato faha-19, ary ny anarana nomen' ny Anglisy azy tamin' izany fotoana izany dia Tanganyika, avy amin' ny anaran' ny farihy Tanganyika any andrefan' i Tanzania.
Sarin-tany maneho ny fizaràm-parira ao Tanzania
Nahazo ny fahaleovantenany ny Tanzanianina tamin' ny taona 1961 ary lasa firenena sôsialista netin' i Julius Nyerere i Tanzania hatramin' ny 1985. Nanomboka ara-dalàna ny mpanohira tamin' ny 1992.
Misy dongolava manana haambo 1 000 m i Tanzania raha jerena avy amin' ny morontsirany. Io dongolava io dia tonga hatrany amin' ny farihy Malawi sy Tanganyika.
Afrika Atsimo - Alzeria - Angôla - Benino - Borkina Fasô - Borondy - Bôtsoana - Ejipta - Eritrea - Esoatiny (Soazilandy taloha) - Etiôpia - Gabôna - Gambia - Ganà - Ginea - Ginea Bisao - Ginea Ekoatôrialy - Jibotỳ - Kamerona - Kapvera - Kenia - Kômôro - Kôtidivoara - Lezôtô - Liberia - Libia - Madagasikara - Malaoy - Malỳ - Maorisy - Maoritania - Marôka - Môzambika - Namibia - Nizera - Nizeria - Oganda - Repoblika Arabo Saharaoy Demôkratika - Repoblika Demôkratikan'i Kôngô - Repoblikan'i Afrika Afovoany - Repoblikan'i Kôngô - Roanda - Saô Tôme e Prinsipe - Seisely - Senegaly - Siera Leôna - Sodàna - Sodàna Atsimo - Sômalia - Sômalilandy - Tanzania - Tôgô - Tonizia - Tsady - Zambia - Zimbaboe.
↑ Tanzania Safari Guide (en)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Tanzania&oldid=1040831"
Dernière modification le 3 Desambra 2021, à 15:32
Voaova farany tamin'ny 3 Desambra 2021 amin'ny 15:32 ity pejy ity.